အလှူတစ်ခုတွင် ဖြစ်သည်။ လူငယ်တစ်ဦးက နောက်ဖေးမီးဖိုချောင်တွင် စားသောက်ပြီးသော ပန်းကန်ခွက်ယောက်များကို သိမ်းကြုံးဆေးကြောနေသည်။ ထိုစဉ် အရပ်လူကြီးတစ်ဦး ရောက်လာကာ
“အေး..အေး..၊ ကောင်းတယ်ကွာ။ ဒီလို သူများမလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်တော့ သူများတွေထက် ကုသိုလ်ပိုရတာပေါ့”
အရပ်လူကြီး စကားမဆုံးခင် လူငယ်က ပန်းကန်များဆေးကြောနေရာမှ ထထွက်သွားသည်။ လူငယ်လေး စိတ်ဝင်စားသည်မှာ ကုသိုလ်ပိုရတာ မရတာထက်၊ ဘယ်နေရာမှာ ၀ိုင်းကူဖို့လိုအပ်သလဲ ဆိုတာဖြစ်ကြောင်း အံ့သြစွာကျန်ရစ်ခဲ့သော အရပ်လူကြီး သိကောင်းမှသိပေလိမ့်မည်။
အိမ်တစ်အိမ်တွင် သားဖြစ်သူ ဆယ်တန်းကျောင်းသားကို ဂစ်တာဝယ်ပေးသောကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဖခင်ဖြစ်သူက-
“မင်းကွာ..၊ ငါသေသေချာချာမှာထားရဲ့နဲ့။ သားကို ဆယ်တန်းအောင်ပီးမှ ဂစ်တာဝယ်ပေးပါလို့။ ချစ်တာလဲ ချစ်တာပေါ့ကွာ။ ဒါပေမဲ့ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ ချစ်တတ်ရတယ်ကွ”
ထိုအခါ မိခင်ဖြစ်သူက ခပ်ပြုံးပြုံးပင် ပြောလေသည်။
“အမလေး၊ ကိုစည်းကမ်းကြီးရယ်..။ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ချစ်တာလဲ ချစ်တာပေါ့ရှင်။ တစ်ခါတစ်ခါတော့ ကလေးကို နှလုံးသားနဲ့လဲ ချစ်တတ်ရသေးတယ်ရှင့်”
မောင်ကကြီးစိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘ၀င်မကျသလိုဖြစ်နေတာ အတော်ကြာပြီ။ သူတို့သူငယ်ချင်းတွေ အရက်ဝိုင်းဖွဲ့မိလို့ နဲနဲလေး အရှိန်ရလာပြီဆိုရင် ဦးတည်မိသည့်အရာ နှစ်ခုသာရှိနေတတ်သည်။ ထိုအရာနှစ်ခုကား ဘာသာရေးနှင့် နိုင်ငံရေး။ ဒါကို မောင်ကကြီး ဘ၀င်မကျဖြစ်နေခြင်းပင်။ သူတွေးကြည့်မိသည်။ သူတို့တတွေသည် ရဲဆေးမတင်ဘဲ ဘာသာရေးနှင့် နိုင်ငံရေးကို ရိုးရိုးဖြောင့်ဖြောင့် မဆိုဝံ့ကြပြီလော။
သွားရိုးသွားစဉ်အတိုင်း ဘယ်ဘက်ချိုးရမည်ကို မချိုးဘဲ၊ ညာဘက်သို့ ကွေ့ထွက်သွားသော လူငယ်လေးကိုကြည့်၍ လမ်းဆုံလမ်းခွမှ လူကြီးနှစ်ဦး စကားဆိုနေကြသည်။
“ဒီကောင်လေးတော့ လမ်းလွဲသွားပြီ၊ ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဗျို့”
“အမှန်ပဲဗျ၊ သူကွေ့ထွက်သွားတဲ့လမ်းက ဘယ်သူမှ သုံးကြတာမဟုတ်ဘူး”
ထိုစဉ် လူငယ်လေးရှေ့မှ ဆူးညှောင့်ခလုတ်များ ဘွားခနဲပေါ်ထွက်လာရာ လူကြီးနှစ်ဦးသည် စုပ်တသပ်သပ်နှင့် မျက်နှာလွှဲ ကျောခိုင်းသွားကြလေသည်။ ဆူးညှောင့်ခလုတ်များကို ကျော်လွှားပြီးသွားသော လူငယ်လေးရှေ့မှ ရောင်သွေးစုံလင် ရှုတိုင်းယဉ်လှသော ပန်းဥယျာဉ်ကြီး ပေါ်ထွက်လာသည်ကိုမူ ထိုလူကြီးနှစ်ဦး တွေ့မသွားရှာချေ။
“ဖြစ်သမျှအကြောင်း အကောင်းချည်းပဲပေါ့ဗျာ။ ဟုတ်တယ်မို့လား ”
လိုင်စင်ခပ်များများ ပိုင်ဆိုင်ထားသော သူဌေးကြီးက ကားသော့ကို လက်တွင်ဝှေ့ယမ်း၍ သူ့မိတ်ဆွေများကို စကားဆိုသည်။ သူတို့ ဘီယာဆိုင်သို့ သွားကြမည်ဖြစ်သည်။ ထမင်းမစားခဲ့ရသေးသော ထွန်တုံးပေါ်မှ လယ်သမားတစ်ဦးအဖို့မူ ဖြစ်သမျှအကြောင်း အကောင်းချည်းပဲဟု ထိုသူဌေးကြီးကဲ့သို့ လွယ်လွယ်နှင့် နှလုံးသွင်းနိုင်အံ့မထင်။
“ခင်ဗျားတို့က အသက်မရှိတော့တဲ့ အလောင်းကိုတောင် ဘာဖြစ်လို့ ခဲရာခဲဆစ် တက်ဆွဲနေကြတာလဲဗျ။ ထားခဲ့လိုက်လို့ မရဘူးလား”
လူတစ်ယောက်က စစ်သားတစ်ယောက်ကို မေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်သားက ဖြေးဖြေးဆေးဆေး ပြန်ပြောသည်။
“အသက်ပဲ မရှိတော့တာပါဗျာ။ သူလုပ်ခဲ့တဲ့ အရာတွေ အများကြီး ကျန်နေပါသေးတယ်။ ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ လူကောင်းသူကောင်းတွေကိုတော့ အလွယ်တကူ စွန့်မပစ်ထိုက်ပါဘူးဗျာ”
“ခင်ဗျားတို့ ကဗျာအသစ်အဆန်းတွေကို ကျနော်နားမလည်ဘူးဗျ။ စကားလုံးတွေကလဲ ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာပဲ။ အယုံအကြည်လဲ မရှိဘူး”
ရူပဗေဒပညာရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။ ထိုအခါ ကဗျာဆရာကလည်း-
“အက္ခရာတွေ၊ သင်္ကေတတွေ၊ ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ ပြွတ်သိပ်နေတဲ့ ရူပဗေဒ အီကွေးရှင်းတွေကို ကျနော်လဲ နားမလည်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဆရာရဲ့ပညာရပ်အပေါ် ကျနော် ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျနော်က မယုံကြည်ဘူးဆိုရုံနဲ့လည်း ရူပဗေဒ အမှန်တရားဟာ ပျောက်ပျက်သွားမယ် မထင်ပါဘူး” ဟု ဆိုလေသည်။
မေး။ ဘာဖြစ်လို့ ကဗျာရေးနေတာလဲ။
ဖြေ။ ဘာဖြစ်လို့မှ မဟုတ်ပါဘူး၊ ရေးချင်လို့ ရေးနေတာပါ။
မေး။ ကဗျာတွေကို ဘာအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ရေးပါသလဲ။
ဖြေ။ ဘာအတွက်တွေ၊ ညာအတွက်တွေက ကိုယ်ပြောရမဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ့ကဗျာတွေက သူ့အလိုလို ပြောသွားမဲ့အလုပ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မေး ။ အောက်ပါတို့မှ အဖြေမှန်ကို ရွေးပါ။
စာဖြေကျောင်းသားတို့ကား ၁ မှ ၄ အထိသာ ဘောင်ခတ်၍ စဉ်းစားကြကုန်၏။ အကယ်၍ ဆရာသည် မည်သည့်နံပါတ်ကိုမျှ အဖြေမှန် ထည့်မထားခဲ့သည်ရှိသော်….။
Posted by ညိမ်းညို at 01:49 18 comments
တရိပ်ရိပ် ပြေးတက်လာကြ၊ ယဉ်ကျေးသော စာမျက်နှာများပေါ်...
စိမ်းရွှေပုပ်အဲ့ လူသွားလမ်းကလေး...။ လေစကြာပင်တွေ တ၀ှီးဝှီး တိုးဝှေ့နေ၊ အထီးကျန်ငြင်းပယ်ခံရခြင်း သစ်သီးများ ယောင်ကိုင်းပြည်တည် ပုပ်ပွ။ မခွဲမစိတ် သွားနဲ့ဖိကိုက်ထားရသလို စိတ်မှာ အရာထင်ခဲ့၊ ကျနော် ကျမတို့ ရိုရိုကျိုးကျိုး တမိုးချုပ်ခဲ့ပြန်ရာ။ တနေ၀င်ခြင်းအမှုန်အမွှားများ ရွေ့ ပြီးရင်း...ရွေ့။ သက်ဆိုင်သူများ၊ မသက်ဆိုင်သူများ သံတုံးသံခဲတွေလို မာခဲအေးဆတ်။ ဆောင်းရဲ့ ပတ်ကြားအက်ကြီးတွေကြား စိမ့်အေးမှုက တစ်စက်စက်ယိုကျပြန်သေး။ လူသူလေးပါး ကင်းဝေးရာ၊ လူလိုသူလို မနေဖြစ်ကြရာ၊ လူတစ်လုံးသူတစ်လုံး အိပ်မက်များလဲ ထွင်းထုရာ။ စကားတွေ၊ တရားတွေ မကြာမကြာလွတ်ကျ/လွှတ်ချ၊ စကားတွေ၊ တရားတွေ မကြာမကြာ ပြန်ကောက်/ပြန်ဆယ်။ တစ်ယောက်တည်းနေတတ်ဖို့ တစ်ယောက်ယောက်ကို အော်ခေါ်။ မနိုင်ဝန်တွေကိုထမ်းထမ်းပြီးတော့ မနိုင်နိုင်ရာမဲ။ ကျန်ခဲ့ရ...၊ ကျပျောက်ခဲ့ရ... ကြေကွဲထိရှစွာ...။ အရိပ်တွေကတော့ ဟိတ်ဟန်ကောင်းစွာ။ အတောင်တစ်ဖက်ကျိုးနေတဲ့ ပျံလွှားငှက်ကလေးကို အားကျချစ်ခင်မိပါရဲ့။ စိတ်ကို ဆူးစူးမခံခဲ့ပုံ။ ဘိုးဘွားပိုင် ယာမြေကလေးကို တူးဆွကြည့်တော့ အိမ်အပြန်ညနေခင်းတွေက တွန့်ခေါက်မှုန်ဝါးဆဲလေ။ ခပ်ဆွေးဆွေး ချုပ်ရိုးတွေထဲ နလန်မထူနိုင်နေ့စွဲများ ရင့်သီးကွဲအက်၊ အာသီသပ၀ါနွမ်းလေး... ညိုမွဲဆွေးရီ။ နေသည် အရှေ့အရပ်မှ ထွက်မြဲ...။ သူတို့ တရိပ်ရိပ် ပြေးတက်လာကြပြီ။ ယဉ်ကျေးသော စာမျက်နှာများပေါ်...။
Posted by ညိမ်းညို at 21:32 12 comments
၁၇၊ ဒီဇင်ဘာသို့ အလင်းစကား
- ရောင်နီဝင်းပြက် အရုဏ်တက်မှာ
- ရာဇ၀င်တောင်တန်း တစ်ခေတ်ဆန်းမှာ
- စိတ်ဝမ်းလက်ညီ ပြည်သစ်တည်ရာ
- ၁၇၊ ဒီဇင်ဘာ
- အိုဒီဇင်ဘာငဲ့ သင်သိရဲ့လား
Posted by ညိမ်းညို at 17:56 11 comments
Posted by ညိမ်းညို at 01:116comments
စီရီပြွတ်သိပ် မြို့ ပြရိပ်ထဲ
(ပိယေဟိ ၀ိပ္ပယောဂေါ ဒုက္ခော)
Posted by ညိမ်းညို at 02:367comments
သူတို့မှ မသိကြတာပဲ အမေရယ်။
Posted by ညိမ်းညို at 03:25 11 comments
ရင်ချင်းဆက်ဘာသာဗေဒ (၀ါ) ကဗျာ
ကျနော်စုထားဖြစ်တဲ့ ကဗျာစာအုပ်(အီးဘုတ်) တွေကို မျှဝေပါရစေ။ တချို့စာအုပ်တွေ ရှိနေပြီးဖြစ်တယ်ဆိုရင် ခွင့်လွှတ်စေလိုပါတယ်။ စာအုပ်တော်တော်များများကိုတော့ ၀က်ဆိုဒ်တွေကနေ ဒေါင်းလော့ယူပါတယ်။ တချို့ စာအုပ်တွေကိုတော့ ကဗျာရေးသူကိုယ်တိုင်က မြတ်မြတ်နိုးနိုး စာအုပ်လေးလုပ်ပြီး မှတ်မှတ်ရရ ပို့ပေးတာမို့ တလေးတစား သိမ်းထားဖြစ်ပါတယ်။ ခဏခဏလည်း ကြည်ကြည်နူးနူး ထုတ်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုချီရွန်ရဲ့ ကဗျာစုစည်းမှု၊ ဘိုတင့်ကြီးရဲ့ ကဗျာစုစည်းမှု၊ ကိုလင်းဦးရဲ့ ၀မ်းနည်းမှတ်တမ်း ကဗျာတွေပေါ့။
နောက် ဂူဂဲကနေ ကဗျာဆရာနာမည် ရိုက်ထည့်ပြီး အဲဒီကနေ ရလာတဲ့ကဗျာတွေကို အီးဘုတ်လုပ်ထားတာလဲ ပါပါတယ်။ ဆရာဇေယျာလင်း ကဗျာစာအုပ်နဲ့ ဆရာဝင်းမြင့်၊ ခရမ်းပြာထက်လူ ကဗျာတွေကို အဲဒီလိုရှာပြီး စာအုပ်လုပ်ထားတာပါ။ ကိုယ်လေးစားအားကျရတဲ့ ဆရာတို့ရဲ့ကဗျာလက်ရာတွေ တစ်စစီ ပြန့်ကျဲနေတာကို တစ်စုတစ်စည်းထဲအနေနဲ့ ဖတ်လို့၊ လေ့လာလို့ အဆင်ပြေအောင် စုထားတဲ့သဘောပါ။ အခြားဘယ်နေရာမှာမှ အကျိုးစီးပွားအတွက် အသုံးပြုထားခြင်း မရှိပါခင်ဗျာ။ ဆရာတို့ရဲ့ ကလောင်အမည်ကိုလည်း ကဗျာတိုင်းမှာ ထင်ထင်ရှားရှား ဖော်ပြထားပါတယ်။ ၀ါသနာတူ ကဗျာရောင်းရင်းများ သူငယ်ချင်းများကိုတော့ ကဗျာဆိုတဲ့ အနုပညာတစ်ရပ်အပေါ် ရူးသွပ်ဖော်ရူးသွပ်ဖက်တွေမို့ မေးလ်ကနေ ကြုံတဲ့အခါတိုင်း ပို့ပေးဖူးပါတယ်။ လူချင်းနီးစပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုတော့ ခွေရိုက်ပြီး ပေးဖြစ်ပါတယ်။ ဟင်းကောင်းကျွေးကောင်းလေး စားရရင် ခင်မင်သူ မိတ်ဆွေတွေကို သတိတရ ရှိတတ်ကြသလိုမျိုးပါပဲ။ ကဗျာကောင်းတစ်ပုဒ် ဒါမှမဟုတ် ကဗျာစာအုပ် အသစ်တစ်အုပ်ကိုများ ဖတ်လိုက်ရပလားဆိုရင် ကျနော်နဲ့ဝါသနာတူ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ဖတ်ခွင့်ရစေချင်တဲ့စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်လာတော့တာပါပဲ။ ဒါကြောင့်မို့ အခွင့်ကြုံတာနဲ့ ကျနော့်မှာရှိတဲ့ ကဗျာတွေကို တစ်ဖက်က သူငယ်ချင်း အားလား၊ မအားလားမှမသိ ဇွတ်အတင်းပေးတတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးကြီး တွယ်ကပ်လာတယ် ဆိုပါတော့ဗျာ :) အခု ဒီအကျင့်ဆိုးကြီးက ဘလော့ပေါ်ထိ ရောက်လာပြီ :D
တချို့စာအုပ်တွေကျတော့ မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာ ကြိုက်လို့ မှတ်ထား၊ တေးထားတဲ့ကဗျာတွေကို စာပြန်ရိုက်ပြီး အီးဘုတ်လုပ်ထားတာပါ။ ဒါကလည်း အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပါပဲ၊ တစ်စုတစ်စည်းထဲနဲ့ အလွယ်တကူ ဖတ်နိုင်အောင်လို့ပါပဲ။ နောက် မဂ္ဂဇင်းတွေကနေ ကဗျာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို သတ်သတ်ရွေးထုတ်ပြီး စုထားတာလေးတွေလည်း ပါသေးသဗျ။ မှတ်မှတ်ရရ ဆရာမောင်ဒီရဲ့ ဆောင်းပါးကတော့ ကိုညိုထက်ညိုကြီး စကန်ဖတ်ပြီး ပို့ပေးထားတာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကိုကြီးရေ :)
ဆရာပိုင်စိုးဝေရဲ့ သိန်းစွန်ငှက်ရဲ့ အပြန်လမ်း ကဗျာရှည်ကို ဆရာနေ၀င်းမြင့်ရဲ့ အက်ဆေးတွေကနေတစ်ဆင့် ရင်းနှီးနေတာ ကြာပါပြီ။ တစ်စွန်းတစ်စ ဖတ်ရတာနဲ့ကို စွဲလမ်းနေခဲ့ရတာလည်း ကြာပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ကဗျာကို တစ်ခါမှ ဖတ်ခွင့်မရခဲ့ဘူး။ တွေ့လည်းမတွေ့ခဲ့ရဘူး။ အခုတော့ အဆင်သင့်လေခြင်းဗျာ။ မြန်မာကျူးပစ်မှာ သိန်းစွန်ငှက်ရဲ့အပြန်လမ်း ကဗျာရှည်ကြီးကို အစအဆုံးဖတ်ခွင့်ရလိုက်တယ်။ တင်ပေးတဲ့ ကဗျာချစ်သူကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ ဒါနဲ့ အခြားစွဲလမ်းနှစ်ခြိုက်ခဲ့ရတဲ့ ကဗျာရှည်တစ်ပုဒ် (ဆရာအောင်ချိမ့်ရဲ့ ဂန္တ၀င်မမ ) ကိုလည်း ကျူးပစ်မှာ ဖတ်ခွင့်ကြုံခဲ့ပါတယ်။ တအား ၀မ်းသာမိပါတယ်။ ဒါနဲ့ အဲဒီကဗျာနှစ်ပုဒ်ကိုလည်း ကျနော် စုထားလိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
နောက် မုတ်ဆိတ်ပျားဆွဲလို့ ဆိုရမဲ့ အမျှော်ကြီးမျှော်နေတုန်း ပေါ်လို့လာတာကတော့ ဆရာသုခမိန်လှိုင်ရဲ့ ဂျွန်လ၏မိုးရေများနဲ့ ဆရာဖော်ဝေး၊ ဆရာမောင်ချောနွယ်၊ ဆရာအောင်ချိမ့်တို့ရဲ့ သစ်ရွက်အသေများပေါ်က ရက်စက်သောဂီတ ကဗျာစာအုပ်နှစ်အုပ်ပါပဲ။ ဆရာမ မနော်ဟရီပြန်တင်ပေးထားတဲ့ ကဗျာတွေကို ၀မ်းသာအားရ စုထားလိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာမကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက် ဆရာနှင်းခါးမိုးနဲ့ ကိုနေမွန်းသင်တို့ ဘလော့ပေါ်က ကဗျာတွေကိုလည်း ခဏခဏ ပြန်ဖတ်ဖြစ်နေတာမို့ တစ်စုထဲ သိမ်းထားဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာစိုင်းဝင်းမြင့်ရဲ့ များများမြန်မြန်ကျတော့ ကိုတောကျောင်းရဲ့ စာအုပ်အညွှန်း ဖော်ပြထားတာကတစ်ဆင့် လမ်းအိုလေးက အီးဘုတ်လုပ်ထားပေးတာကို ဒေါင်းလော့ယူပါတယ်။ ကိုတောကျောင်းကိုရော၊ လမ်းအိုလေးကိုရော ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ။
အောက်မှာ စာရင်းပြထားတဲ့ ကဗျာစာအုပ်တွေကတော့ ဆိုခဲ့ပြီးသလို နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်နဲ့ စုဆောင်းထားတာတွေပါပဲ။ ကဗျာတွေကို ကနဦး မွေးဖွားပေးခဲ့ကြတဲ့ ကဗျာဆရာတွေနဲ့ တဆင့်ပြန်လည် ဖော်ပြပေးကြတဲ့၊ မျှဝေပေးကြတဲ့ ကဗျာချစ်သူတွေကို ကျနော်က လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကြီး ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ကျနော့်မှာရှိနေသလောက်လေးကိုလည်း မိတ်ဆွေတို့ဖတ်ဖို့ ပြန်ပြီးတော့ မျှဝေချင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ဆီမှာ အင်တာနက်က လစ်မစ်နဲ့(တစ်ရက် ၃၅၀မက်) သုံးရတာမို့ စာအုပ်တွေအားလုံးကိုတော့ အပ်လုပ်တင်ပြီး လင့်မချိတ်တော့ပါဘူး။ မိတ်ဆွေတို့ နှစ်သက်တဲ့ ကဗျာစာအုပ်များကို စီးပုံးမှာဖြစ်ဖြစ်၊ ကွန့်မန့်မှာဖြစ်ဖြစ် စာရင်းတို့ခဲ့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဲဒီမိတ်ဆွေတို့ စာရင်းတို့ခဲ့တဲ့ ကဗျာစာအုပ်ကို အတ်လုပ်တင်ပြီးတော့ လင့်ထားပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ။ မိတ်ဆွေတို့ဆီမှာရှိတဲ့ ကဗျာစာအုပ်များကိုလည်း လက်တို့ခဲ့ပါဦးလို့ ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ အမှာစကားဆိုပါရစေလားခင်ဗျာ :)
၁။ ကဗျာ ၅၀၀ မှ
၃။ ဒဂုန်တာရာ-ကဗျာဆရာ၏ ရိုးဖြောင့်မှု
၄။ ဒဂုန်တာရာ-မုန်းသူမရှိ ချစ်သူသာရှိ
၁၀။ လွတ်လပ်အိမ်-ပို့စ်မော်ဒန်ဝါဒ၊ ပို့စ်မော်ဒန်ခေတ်၊ ပို့စ်မော်ဒန်ယဉ်ကျေးမှု
၁၁။ ၀င်းမြင့်+ဝေမှူးသွင်-လူပြိန်းရဲ့ အချစ်ဖြစ်ပွားရာ
၁၄။ ဧကစာမီးခိုးများ- ခေတ်ပေါ်ကဗျာ
၁၅။ ကဗျာဆရာများ- ပထမဆုံးလိပ်စာ
၁၇။ ကိုချီရွန် ကဗျာများ download
၂၂။ ချစ်သူဖတ်ဖို့ အချစ်ကဗျာများ
၃၀။ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်- ရှားလော့ဒေ၀ီနှင့် ဘာသာပြန်ကဗျာများ
၃၁။ တင့်ထူးရွှေ-ရင်ခုန်သံနဲ့ တူးဆွမိတဲ့ရတနာသိုက်
၃၂။ တာရာမင်းဝေ-ပြိုင်မြင်းတို့ရဲ့ခွာသံ download
၃၃။ တာရာမင်းဝေ-မိုးခေါင်လို့တီးတဲ့ဗုံသံ download
၃၆။ မြင့်စိုးလှိုင်- ငှက်တေလေ
၃၇။ မြင့်စိုးလှိုင်- တဂိုး(ချစ်သူ့လက်ဆောင်)
၃၈။ မြင့်စိုးလှိုင်-ရာဘင်ဒြာနသ်တဂိုး၏ အချစ်ကဗျာ ၁၀၁ပုဒ်
၄၀။ မင်းထက်မောင်-အကြောင်းရှာသူရဲ့ ပျိုးခင်း
၄၄။ မြန်မာခေတ်ပြိုင်ကဗျာ လျှပ်တပြက်ရုပ်ပုံလွှာ
၄၇။ မြသန်းတင့်-လမင်းကိုထရံပေါက်မှချောင်းကြည့်ခြင်း download
၄၈။ မြသန်းတင့်-မော်ဒန်ကဗျာနှင့်ပတ်သက်၍ download
၅၀။ မိုယ်းဇော်+၀င်းမြင့်- လူစီရဲ့ အမှုန်အမွှားကင်းစင်သော...
၅၃။ လူငယ်ကဗျာဆရာလေးဦး၏ ခေတ်ပေါ်ကဗျာများ
၅၉။ သစ္စာနီ(ဘာသာပြန်)- ဂျပန်ကဗျာများ
၆၀။ သစ္စာနီ-သက္ကရာဇ်မျဉ်းများ ခေတ်ပြိုင်အနုပညာဂရပ်
၆၁။ သစ်ရွက်အသေများပေါ်က ရက်စက်သောဂီတ
၆၄။ ပိုင်စိုးဝေ၊အောင်ချိမ့်-သိမ်းစွန်ငှက် အပြန်လမ်း၊ ဂန္ထ၀င်မမ
၆၆။ အချစ်ကဗျာ(၉၈)-(၉၈) အချစ်ကဗျာ
၆၇။ နိုင်ငံရပ်ခြား ခေတ်သစ်ကဗျာများ
၆၈။ ဝေမှူးသွင်-သစ်ရွက်တို့၏ ပေါ့ဆခြင်းများ download
၆၉။ ဝေမှူးသွင်-အချစ်အကြောင်း download
၇၅။ ဇေယျာလင်း ကဗျာများ download
၇၆။ ဇော်ဂျီ- ညီသစ်ဆင်းကဗျာများ
၇၈။ ဇော်ဇော်အောင်- ပို့စ်မော်ဒန်သီဝရီများ
၇၉။ ဇော်ဇော်အောင်-နွားကျောင်းသားကဗျာ ၁၀ ပုဒ်
၈၂။ မြေချစ်သူ- မြေချစ်သူကဗျာများ
၈၃။ မောင်ခိုင်မာ- ရှင်မရေ (၁)
၈၄။ မောင်ခိုင်မာ- ရှင်မရေ (၂)
၈၇။ မောင်သစ်တည်-ခေတ်ပေါ်နိုင်ငံတကာကဗျာရှည် ၃ပုဒ်
၈၈။ မောင်သိန်းဇော်- နှင်းရည်စက်လက်+ ရှုမျှော်ခင်း ၂၁
၈၉။ မောင်သာနိုး- ဂန္ထ၀င်မြန်မာကဗျာ
၉၀။ မောင်သာနိုး- နိုင်ငံခြားမြန်မာကဗျာခံစားချက်များ
၉၁။ မောင်ချောနွယ်- ရထား(ကဗျာရှည်စုစည်းမှု)
၉၂။ မောင်ချောနွယ်+အောင်ချိမ့် -သမိုင်းဖတ်စာ
၉၃။ မောင်ချောနွယ်ကဗျာပြပွဲ download
၉၆။ အောင်ဝေး- လူငယ်တွေရဲ့ကဗျာ(၂၀၀၃)
၉၉။ အောင်ဝေး-မဲဆောက်ကွန်မြွမ်းမှ တိုက်ပွဲဝင်ကဗျာများ
1. William Shakespeare(1564-1616)- Sonnets
2. Александр Пушкин-Сказка о царе салтане (ပွတ်ရှကင်- ဧကရာဇ်အကြောင်း ပုံအလင်္ကာ)
3. Сказки Пушкина (ပွတ်ရှကင်ရဲ့ ပုံအလင်္ကာများ)
4. Bret Harte- East And West Poems
5. Robert Louis Stevenson- New Poems
6. Geoffrey Chaucer- The Canterbury Tales And Other Poems
7. Emily Dickinson- Poems Three Series Complete
8. Omarkhayyam Of Naishapur - Translated By EDWARD FITZGERALD
9. Gilbert Chesterton- The Wild Knight And Other Poems
10. Lewis Carroll- Phantasmagoria And Other Poems
11. 100 poems
အင်္ဂလိပ်ကဗျာစာအုပ်တွေကို ကျနော် သေသေချာချာ မဖတ်တတ်သေးပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဖတ်လိုတဲ့အခါ ပေးလို့ရအောင် ဒေါင်းလော့ယူထားပါတယ်။
အထက်အောက် စဉ်တာကိုတော့ ၀ါစဉ်ကြီးငယ်သဘောရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ စာအုပ်ထွက်ရှိရာ နှစ်အလိုက်ရယ်လို့ စဉ်ထားတာလဲ မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ အဲဒီလို အထက်အောက်စဉ်ဖို့ကျပြန်တော့ အခက်အခဲရှိနေတာမို့ စာအုပ်စာရင်း ရှိနေတဲ့အတိုင်း random သဘောမျိုးပဲ စဉ်ထားလိုက်ရပါတယ်။ ဒီအတွက် အမြင်မတော်တာမျိုး ဖြစ်စေခဲ့မယ်ဆိုရင် တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Posted by ညိမ်းညို at 02:53 16 comments
Posted by ညိမ်းညို at 23:357comments
သဘာဝကျကျ မသန့်မစင်ဖြစ်တည်နေတဲ့ ဂြိုဟ်ကြီးတစ်လုံးရှိပါတယ်
မသန့်စင်တဲ့လူတွေကို သူ့ဝမ်းဗိုက်ကြီးထဲ ထည့်ထည့်မျိုလို့
မသန့်စင်တဲ့အရာတွေကို သူ့ကျောကုန်းကြီးပေါ် ဆွဲဆွဲတင်လို့
ဒါဟာ မသန့်စင်တဲ့ ကဗျာပါအကြောင်းတရားတွေပါပဲ။
အနိဌာရုံအကြမ်းအခက်ကြီးတွေနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ကဗျာတွေထက်ထက်မြက်မြက်မဖြစ်ရမှာလဲ။
မသန့်စင်ခြင်းဟာ မသန့်စင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်၊ အရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်ခြင်း မဟုတ်ပါဘူး
မသန့်စင်ခြင်းဟာ မသန့်စင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ တရားလက်မဲ့ဖြစ်ပျက်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး
ကဗျာအများစုက မှန်နန်းဆောင်ဇာခန်းဆီးအတွင်း ၀ပ်ဆင်းကျရောက်နေချိန်
၀န်ကြီးတစ်ဦးက ထန်းသမားမိသားစုနဲ့အတူ ထမင်းလက်ဆုံစားခဲ့တယ်
သူဟာ မသန့်စင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအပေါ် စာနာတိမ်းညွှတ်ခဲ့တယ်
သူဟာ မသန့်စင်တဲ့ကဗျာတွေကို ရေးဖွဲ့ခဲ့တယ်
ဒါဟာ ဒီမြေပေါ်မှာ အမှန်တကယ်ရှိနေတဲ့ မသန့်စင်ခြင်းတွေ ဖြစ်တယ်
မသိယောင်ဆောင်ရုံ၊ မျက်ကွယ်ပြုရုံနဲ့ ပပျောက်မသွားမဲ့ မသန့်စင်ခြင်းတွေ ဖြစ်တယ်။
လူများစုဟာ မသန့်စင်ခြင်းရဲ့အရသာကို တင်းကြမ်းခံစားနေရတယ်
မသန့်စင်ခြင်းဟာ ဒီကမ္ဘာကြီးရဲ့ အနှံ့အပြားမှာရှိနေတယ်
မသန့်စင်ခြင်းဟာ ထမင်းတစ်လုပ်အတွက် ပင်ပန်းကြီးစွာ၊ အညှာအတာကင်းစွာ၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာချို့တဲ့စွာ
မသန့်စင်ခြင်းဟာ တစ်ဝမ်းတစ်ခါးအတွက် မှောင်ခိုလဲကူးရ
တစ်ပြားတစ်ချပ်အတွက် စက်ရုံကြီးတွေထဲမှာလဲ ပိတ်လှောင်ခံရ
ကျောက်မီးသွေးတွင်းကြီးတွေမှာ၊ ဒြပ်သတ္တုလုပ်ငန်းခွင်ကြီးတွေမှာ၊ စစ်ပွဲတွေမှာ
ပတ်ကြားအက် ရိုးပြတ်ငုတ်တိုလယ်ကွင်းပြင်တွေမှာ၊ နောက်ကျန်ဘီးများနဲ့ ကြက်ယက်သလိုယက်နေရတဲ့နေရာတွေမှာ
ရောဂါဘယကပ်ဆိုးတွေနဲ့ လူလူသူသူ နေလို့၊ စားလို့၊ တွေးလို့၊ တောလို့ မရတဲ့ ဒေသတွေမှာ
မသန့်စင်ခြင်းတွေဟာ နေလောင်ချွေးစားပြီး ထွားကျိုင်းသန်မာနေကြ၊ လှိုင်လှိုင်ကြီးသီးပွင့်လာနေကြ
အပ်ဖျားတစ်ထောက်စာ အရေပြားပေါ်က ဖြူတယ်မဲတယ်ဆိုတဲ့ အရောင်အတွက်နဲ့လဲ သင်းကွဲနှိပ်ကွပ်ခံရ
ငြိမ်းချမ်းမွန်မြတ်တဲ့ဘာသာရေးဝတ်ရုံအောက်မှာ လက်နက်ပုန်းတွေ ကိုင်ဆောင်လာကြ
ကျောင်းတော်သာရဲ့ ဆွတ်ပျံ့ဆွေးဖွယ်လမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာတောင် မသန့်စင်ခြင်းတွေဟာ စိမ့်ဝင်နေကြ
စိန်စီရွှေချခန်းမကြီးတွေအတွင်းမလဲ ဒီမသန့်စင်ခြင်းတွေပဲ ပွဲတက်ကခုန်နေကြ
မသန့်စင်ခြင်းတွေဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတောင် ဓားထက်ထက်နဲ့ လှီးဖြတ်နေကြ
မသန့်စင်ခြင်းတွေဟာ အသွင်သဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ နေရာဒေသအသီးသီးကို လွှမ်းမိုးလာကြ
လူနည်းစုဟာ မိမိရဲ့သန့်စင်မှုအတွက် လူများစုကို မသန့်မစင်တဲ့အခြေအနေတွေထဲ တွန်းပို့နေကြ
အရှိန်နဲ့၊ ပါဝါနဲ့၊ စွမ်းအားတွေနဲ့ မသန့်စင်ခြင်းအပေါ် လက်လွှတ်စပယ်ပြောဆိုကြ၊ ဖိနှိပ်ကြ
ကျနော်တို့ဟာ ဒီမသန့်စင်ခြင်းတွေကို ကဗျာပြုကြတာဖြစ်တယ်၊ ဒီမသန့်စင်ခြင်းတွေကိုပဲ ဆွဲကူထူမကြတာဖြစ်တယ်
မသန့်စင်ရခြင်းရဲ့ ရင်းမြစ်တွေကို စီစစ်ရှာဖွေကြတာဖြစ်တယ်
ဒါဟာ မသန့်စင်တဲ့ ကဗျာပါအကြောင်းတရားတွေပဲဖြစ်တယ်။
တစ်ခါတစ်ခါတော့လည်း ကိုယ့်ရင်ဝကိုယ် ဓားနဲ့ထောက်ကြည့်ရတာ ရင်ခုန်စရာကောင်းလှပါတယ်
မသန့်စင်တဲ့ကဗျာတွေကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးရေးရင်း ကျွတ်ဆတ်ဆတ်ရင်ဘတ်တစ်နေရာကို စာနာမှုပလပ်ခေါင်း ထိုးချလိုက်ပြီ
Posted by ညိမ်းညို at 00:31 15 comments
ငါတို့မြင်ကွင်းတွေထဲ တရွေ့ရွေ့တွားတက်ပြီး လာနေ
နောက်ပိုင်းမှာ အုပ်စုတွေဖွဲ့ပြီး ချီတက်လာကြ
ရေထု လေထု မြေထု
တစ်လောကလုံး အောက်သိုးသိုးအနံ့တွေ မွှန်စော်ထူပိန်းလို့
ပိုးဟပ်တွေ ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါ တောက်ပလာကြပုံ
ပိုးဟပ်တွေ တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင် ထောက်ခံအားပေးကြပုံ
ပိုးဟပ်တွေ တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင် ရိုက်ကုန်ကြပြီ
အာ ယောင်လို့ ယောင်လို့
ကြာလာတော့ အကျည်းတန်နေတာကြီးကိုက လှသလိုဖြစ်
မကြာခင် ကမ္ဘာကြီးကို ၀ါးမြိုပစ်တော့မယ်တဲ့
ဒီလို ဒီလို အစရှိနောက်နောင်
ခင်ဗျားဟာ လူကြီးလူကောင်းအယောင်ဆောင်ထားတဲ့ ခပ်လည်လည်ပိုးဟပ်တစ်ကောင်ပဲ
ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို ပိုးဟပ်မြို့တော်ကြီး လုပ်ပစ်မယ်တဲ့
ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးက ပိုးဟပ်တွေအတွက် ပျော်တော်ဆက်ဖြစ်စေရမယ်တဲ့။
Posted by ညိမ်းညို at 18:27 14 comments
ငွေစကြေးစလေးနဲ့ ကလော်ထုတ်ပီး ခတ်ကြည့်မယ်
ခင်ဗျားက တစ်နေ့တစ်နေ့ ၀မ်းနည်းကြေကွဲမယ်
တစ်နေ့တစ်နေ့ နာကျည်းပေါက်ကွဲမယ် ကြုံးဝါးအော်ဟစ်မယ်
ခင်ဗျားက အားအားရှိ ငိုကြီးချက်မနဲ့
ပိုးဟပ်တွေအသဲကွဲတာကိုပဲ အဆန်းလုပ်ပီး ရေးရေးနေ
Posted by ညိမ်းညို at 16:29 14 comments
Posted by ညိမ်းညို at 08:27 20 comments
- နှုတ်ခမ်းမှာ သကာစု
- ပါးပြင်မှာ နံ့သာစု
- မျက်ဝန်းမှာ ငွေ့ရည်စု
Posted by ညိမ်းညို at 01:02 8 comments
မင်းက ကဗျာသရဲပဲ၊ အစွန်းရောက်နေပြီတဲ့
တခါလောက်ဖြစ်ဖြစ် ငိုလိုက်ချင်လို့ပါ အမေရယ်...။
Posted by ညိမ်းညို at 00:05 11 comments
မင်းက တွေ့ကရာ ချိန်,ချိန်နိုင်လွန်းတော့
ပြေးလမ်းတွေက နဲသထက် နဲနဲလာပေါ့ကွယ်။
Posted by ညိမ်းညို at 00:049comments
Posted by ညိမ်းညို at 00:566comments
- မော်စကို မြစ်ကူးတံတားတစ်စင်းပေါ်မှာ...
Posted by ညိမ်းညို at 00:559comments
Posted by ညိမ်းညို at 00:515comments
ထိပ်ပုတ်ခေါင်းပုတ် အကြိမ်တစ်သိန်း တုပ်တုပ်မလှုပ်
Posted by ညိမ်းညို at 22:44 11 comments
သြော်... အောက်မေ့ဖွယ် အဆွေး။
Posted by ညိမ်းညို at 01:00 17 comments
Posted by ညိမ်းညို at 23:299comments
သူ့မျက်ရည်ကို ဘယ်တော့မှ မြင်ရလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူး
- ဖျားရင်းနာရင်းနဲ့ပဲ ဒီကဗျာလေးတွေကို ကျနော် ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာကိုမှ မရည်ရွယ်သလို ဘာကိုမှလည်း မရည်ညွှန်းပါဘူး။ ကဗျာနဲ့ပတ်သက်ရင် လောဘကြီးတတ်တဲ့ကျနော် ရလာသမျှကို စုဆောင်းသိုဝှက်လိုက်တယ်ပဲ ဆိုပါတော့။
Posted by ညိမ်းညို at 12:53 13 comments
Posted by ညိမ်းညို at 12:523comments
Posted by ညိမ်းညို at 12:515comments
Posted by ညိမ်းညို at 12:504comments
Posted by ညိမ်းညို at 12:494comments
သဲ့သဲ့လေးပဲ ကြားစေတော့မယ် ဆိုဦးတော့
မင်းကို ငါ့အသက်လောက် ချစ်တယ်။
Posted by ညိမ်းညို at 12:493comments
Posted by ညိမ်းညို at 12:485comments
Posted by ညိမ်းညို at 12:463comments
အဆိပ်အတောက်မပါဖို့တော့ ရဲရဲကြီး အာမခံတယ်
Posted by ညိမ်းညို at 01:306comments
Posted by ညိမ်းညို at 01:294comments
ကျုပ်အဖို့ အကြီးမားဆုံး စက်မှုလုပ်ငန်း
Posted by ညိမ်းညို at 01:266comments
Posted by ညိမ်းညို at 01:399comments
ကျားတွေလို နောက်ဂျွမ်းပစ် ပြန်ထွက်သွားကြ။
ရနံ့သစ်၊ အောက်တိုဘာ၊ ၁၉၉၉
Posted by ညိမ်းညို at 17:439comments
အရွယ်စုံဆိုဒ်စုံ ဂျုံရိုးဦးထုပ်လေးတွေကို ငေးရင်း
Posted by ညိမ်းညို at 02:08 22 comments
ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီး ကဗျာမရေးခဲ့ပါဘူး အမေရယ်
ရိုးသားခြင်းဝတ်ရုံကိုခြုံပြီး ကဗျာရေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်
သားက စွဲစွဲလမ်းလမ်းချစ်နေရတာပါ အမေရယ်..။
Posted by ညိမ်းညို at 18:49 17 comments
တဖန် တရားမမင်သော်ငြား ပုဂ္ဂိုလ်ခင်ချင်ခင်ပါမည်
ပုဂ္ဂိုလ်မခင်သော်ငြား တရားကိုလဲ မင်ချင်မင်ပါမည်။
ဧရာဝတီကို ရေစီးသန်လှသည်၊ ကြမ်းတမ်းလှသည်ဟု မဆိုချင်ပါ။
လတ်ဆတ်ဝဖီးနေသော နုန်းမြေနုစိုက်ကွင်းစိုက်ကွက်များကို တ၀ကြီးငေးမော၍
ဧရာဝတီ၏ အသုံးဝင်မှုတန်ဖိုးနှင့် အိနြေ္ဒကြီးမားသော အလှတရားကို
အဆိုးဆုံးမှာ ပြိုင်ဆိုင်၍ မနေချင်ပါ
ညိမ်းညိုသည် ညိမ်းညိုစစ်စစ်ဖြစ်ခဲ့လျှင်ပဲ ကျေနပ်ပါသည်။
နောက်ဆုံး ကမ္ဘာကြီးပေါ်တွင် ကိုယ်တယောက်တည်း ကျန်ခဲ့လျှင်ပင်
လူသည် ကုန်ပစ္စည်းမဟုတ်ဟု ထင်ပါသည်
လူတကိုယ်စာဆန့်သည့် ချိန်ခွင်အကြီးကြီးများ ထုတ်လုပ်ပေးစေချင်ပါသည်။
(နှိုင်းယှဉ်သမှုပြုကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များကို မလိုအပ်ဘဲ အပန်းမကြီးစေချင်ပါ)
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ သုံးသပ်မှု(သီဝရီ)က နောက်ကလိုက်သည်
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ သုံးသပ်မှု(သီဝရီ)က ရှေ့ကသွားသည်
ဖန်တီးမှုက နောက်ကလိုက်သည် ဟု
တစ်စုံတစ်ယောက်က သို့မဟုတ် အချိန်ကာလတခုခုက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့သော်
ညိမ်းညိုသည် မင်းတုပ်အားလုံးဖြုတ်ထားသော ခပ်ညံ့ညံ့ဦးခေါင်းတလုံးကို ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ပါသည်။
ချီးကျူးခံရခြင်းသည် ကောင်းပါသည်၊ ထို့ကြောင့် နှစ်လိုစွာ လက်ခံပါသည်
အဆဲခံရခြင်းသည် မကောင်းပါ၊ သို့သော် နှစ်လိုစွာ လက်ခံပါသည်
ကလောင်သွားသည် ဓားသွားထက် ထက်ပါသည်
တစ်ဖက်လူကို ထိုးခုတ်မျိုးဖြုတ်ဖို့တော့ ဟုတ်မယ်မထင်ပါ။
အပြောကောင်းဖို့မလို၊ အကောင်းပြောဖို့ လိုသည်
လူငယ်စိတ်ဖြင့် တချိန်က နားယောင်ခဲ့ဖူးသည်
ကိုယ်တိုင်လည်း ဘုမသိဘမသိနှင့် မုန့်ကျွေး၍ နှစ်သိမ့်မခံလိုပါ
အခြေအနေကို ဂဃနဏ သိလိုပါသည်
ထိုသို့ နှစ်သက်ကျေနပ်စွာ သိရလျှင်
လှည်း၊ လှေအပေါင်းကို ထုထောင်းပုတ်ခတ်မပြုလိုပါ။
မရှိသောစည်းများ၊ မရှိသောဘောင်များကို ပင်ပန်းတကြီးခဲကတ်ရှာဖွေ၍
တခါတခါ ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်မောပစ်လိုက်ချင်ပါသည်။
ခေါင်းအုန်းနေရသော အချိန်အခါမို့ အားငယ်ဖို့မလိုပါ
သူတစ်ပါးခေါင်းအုန်းနေသော အခြေအနေမို့လဲ မာန်တက်ဖို့မလိုပါ
စိမ်းစိုသစ်လွင်သောအရောင်ကို ညိုမွဲခြောက်သွေ့နေသည်ဟု မြင်တတ်လေ့ရှိပါသည်။
မြန်မာဖြစ်ရသောကြောင့် (အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များခံစားနေရသလို) ထူးပြီးမရှက်မိပါ
တူညီသော လူ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိသည်ဟု စွဲမှတ်ယုံကြည်ပါသည်
ဘယ်တိုင်းပြည်က ပိုရှေးကျပြီး တွေ့ရသည်ဖြစ်စေ၊ မတွေ့ရသည်ဖြစ်စေ
ဘယ်နေရာက လူအဖြစ်ကို စတင်တွေ့ရှိသည်ပဲဖြစ်စေ
လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ရခြင်းအပေါ် ရှက်ခြင်းမရှက်ခြင်း သက်ရောက်မည်မထင်ပါ
ညိမ်းညိုမိုက်ရိုင်းလျှင် ညိမ်းညိုမိုက်ရိုင်းသည်သာ ဖြစ်ပါမည်
ညိမ်းညို၏မိုက်ရိုင်းမှုသည် ရောယောင်၍ ယဉ်ကျေးသွားမည်မဟုတ်ပါ
ဘ၀တစ်ခုအတွက် လူမျိုးတစ်မျိုး၏ အရေခွံကို
နှစ်၁၀၀ထက် ပိုခြုံထားချင်၍ ရမည်မထင်ပါ။
ဂိုဏ်းဂဏများဖွဲ့၍လည်း အနုပညာကို မတူးဆွလိုပါ
ဒီတစ်သက် အနုပညာမရဘဲ နေရပါတော့မည်။
ခြောက်ပေါင်တူနှင့် ပြားနေအောင်ထုပစ်လိုက်ဖို့ ကောင်းပါသည်။
အရိုးထုတ်ပါ၊ အရေစုတ်ပါ၊ အသားနွှာပါ
Posted by ညိမ်းညို at 20:49 24 comments
ကိုက ထိကရုန်းပင်လေး ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်...။
Posted by ညိမ်းညို at 23:30 18 comments
ကဗျာဆရာဟာ ချစ်သူကို မြတ်နိုးတွယ်တာသလို
ဘယ်နေရာက စဖတ်ဖတ် မယ်ဖကို တွေ့နိုင်တယ်။
ဒဏ်ရာတွေကို မျက်ရည်အစက်စက်နဲ့ ရေတွက်ခဲ့တယ်။
မယ်ဖဟာ အသက်ငွေ့ငွေ့လေး ရှိနေသေးတယ်။
ပွဲနေပွဲထိုင်အ၀တ်အစားတွေနဲ့ ဂုဏ်ရည်ကြီးမြင့် အသရေတင့်လှချည့်
မယ်ဖဟာ လက်ဖက်ပင်လေးကို ဒီလိုပြောရှာရဲ့။
ဂေါ်ရခါးသီးနဲ့မုန်ညှင်းကိုသာ ပေါပေါလောလောရနိုင်တဲ့ မယ်ဖရယ်လေ
ဘုစုခရုတံတားလေးတွေအများကြီးထဲက တစ်စင်းတစ်လေ ပျက်ယွင်းသွားရင်ကိုပဲ
ကြမ္မာကောင်း လာဘ်ကောင်းတွေကို ဆောင်ကြည်းပေးတတ်လို့
အဲဒီလို ရာဇ၀င်အခင်းအကျင်းနဲ့ မယ်ဖဟာ
သူ့လည်မြိုမှာ တစ်စုံတစ်ရာ ဖိညှစ်ခံထားရပေါ့
မြို့သူမြို့သားတို့ရဲ့ ဟီးရိုးကြီး မယ်ဖ
ခွန်အားရှိသမျှ ရုန်းခဲ့လှုပ်ခဲ့တယ်(သူဟာ သူ့ရာဇ၀င်ကို တန်ဖိုးထားတယ်)
၁၉၉၄ အလွန်နှစ်များမှာ အငိုက်မိသွားရရှာသူ မယ်ဖဟာ
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အလွန် ကာလများမှာတော့
မယ်ဖဟာ အချိုးအကွေ့တွေ များလွန်းခဲ့တယ်
သက်ရှိတွေကိုပါ ခါးပိုက်ထဲထည့်ထားလို့ရတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတော့
ဒီလိုပဲ စူးစူးဝါးဝါး အော်ခဲ့ကြ
(လူတွေက အဲဒီကိရိယာတန်ဆာပလာတွေကို မြင်ရုံနဲ့ကြောက်တယ်)
အူ၊ အသဲ၊ အဆုတ် ကလီစာအမှုန်အမွှားလေးတွေမကျန်
ပုဝါမကူ ရေမရှူစတမ်း စုပ်ယူဝါးမြိုကြ
တရားဓမ္မသံတို့ ငြိမ်းအေးကြည်သာစွာ ပျံ့လွင့်လို့
ဗမာ၊ ရှမ်း၊ လီဆူး၊ ပလောင်၊ တရုတ်၊ ဂေါ်ရခါးနဲ့ ငါတို့ရဲ့မိတ်ဆွေများဟာ
သာရေးနာရေး အစုစုအမှုမှု၊ ဒေသရိုးရာပွဲတော်အသီးသီးမှာ
မယ်ဖဟာ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာမီးရှူးတန်ဆောင်ကို အမြင့်မားဆုံးထွန်းညှိလို့
မယ်ဖဟာ စားဝတ်နေရေး အမှုကြီးသုံးပါးကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း ထမ်းပိုးလို့
မယ်ဖဟာ နှင်းမြူဖွေးဖွေးကြားမှာ နွေးထွေးလုံခြုံလို့
မယ်ဖဟာ ဇာပုဝါပါးပါးလေး ခြုံလို့
ယိုးဒယား၊ လန်ဒန်၊ အမေရိကား မြို့ကြီးပြကြီးတွေနဲ့
မယ်ဖဟာ တကယ်ကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့စွာ လှပခဲ့ပါတယ်လေ။
သန္တာ၊ မြ၊ ဥဿဖယား၊ ဂေါ်မိတ်၊ ကြောင်
ခွေးတွေကြက်တွေလို မြေကြီးကို နာနာယက်ကြ
ကြွက်တွေလို ဂလိုင်တွေတူးဆွကြ၊ လိုဏ်ခေါင်းတွေဖောက်ကြ
ဒိုင်းနမိုက်တွေ၊ ယမ်းအားပြင်းပြင်းတွေနဲ့ ဖောက်ခွဲလိုက်ကြ
ရမ်းရမ်းကားကားမောင်းတတ်တဲ့ ဘီးခွံထူထူနဲ့ ကားအမြင့်ကြီးတွေ
ကျောက်မျက်ရတနာထက်တောင် ရှားပါးခက်ခဲနေတဲ့ လူသေမျက်နှာကြီးတွေ
တရားစီရင်ခွင့်ကို လိုအပ်သလိုပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ ဧရာမပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ
ကိုယ့်ကြီးထွားမှုကလွဲရင် အခြားဘာကိုမှ မြင်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့
ဘုရား၊ ကျောင်း၊ ကန် အကာအရံတံတိုင်းတွေ ကျွံကျ
လူနေမှုဘ၀အာမခံချက်တွေ ကျွံကျခဲ့ရတာပဲ မယ်ဖရေ။
ဖြူပြီပေါ့ဗျာ၊ မည်းပါဦးမလား" လို့ဆိုကြ
အတင်းရော ဇွတ်ရော အဓမ္မရော ခံစားကြုံတွေ့နေရပေါ့။
ဖူးမ၀ဖြစ်နေတဲ့ ပုပုရွရွဝေနေယျတွေကလဲ ဒုနဲ့ဒေး
လူရည်လည်ကြီးတွေက မင်းကိုနေ့ပြန်တိုးနဲ့ ချေးစားနေကြပြီကွ
အမြီးကျက်ဖို့လဲ မလိုတော့ဘူး၊ ခေါင်းကျက်ဖို့လဲ မလိုတော့ဘူးတဲ့
သူတို့ မင်းကိုအစိမ်းလိုက် ၀ါးစားနေကြပြီ မယ်ဖ။
ငါ လူရိုင်းပဲလုပ်တော့မယ် မယ်ဖ။
ဒီတွင်းနက်ကြီးထဲကနေ ငါတို့ အတူတူခုန်တက်ကြစို့။
(၇-၁၁၊ ၉၊ ၂၀၀၈)
Posted by ညိမ်းညို at 16:01 16 comments
မင်းအိမ်လေး အဆင်တန်ဆာတွေမစုံလင်တော့တာကို ငါဝမ်းနည်းတယ်
မင်းကဗျာတိုင်းမှာ အရိပ်အယောင်တွေပက်ဖျန်းခွင့်မရှိတော့တာကို နှမျောတယ်
ရင့်ရာကနေ မာကျောလာရတာကို ကြိုက်တယ်တဲ့
ဒီလူ အခုတလော သိပ်ရင့်နေတယ်
အဲဒီ မာန်ကလေးကလဲ တစ်ချို့တစ်စိတ်ပါနေသေးထင်ပါရဲ့ဘိုတင့်ရာ…။
ငါ့တစ်ကိုယ်လုံး ပြာကျသွားအောင် ပြုစားခဲ့
"ငါ့ဘ၀ငါ့ကမ္ဘာမှာ ငါ့အဘိဓမ္မာနဲ့ ငါနေတယ်"
Posted by ညိမ်းညို at 10:04 18 comments
၁၉၄၉ - ၂၀၀၂
ကင်ပေတိုင် လက်သည်း ခွာသလိုခွာ
ပဋိပက္ခ နဲ့ သမူဟ
ငါ အခု မေ့သွား ပြန်ပြီလား
အားရင် ရွတ်ရွတ် မနေနဲ့ 
အားရင်ရေးရေး မနေနဲ့ 
ချစ်သူရဲ့  တားမြစ်စကား
ငါလွှတ်မယ့် ငှက်ကလေး ဖြည်းဖြည်းပျံ
ခြေတစ်ဖက်ချစာ ပေးပါလို့ 
တိုးလို့ တွဲလောင်းလက်သာ မြဲအောင်ကိုင်ထား
အနုပညာ အမြန်ယာဉ်ကလေး ထွက်တော့မှာလား ။ ။
(စက်တင်ဘာ၃၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သော ဆရာ မောင်ချောနွယ် သို့)
ရထား၊ သမိုင်းဖတ်စာနှင့် ၅၆ပုဒ် ကဗျာစုစည်းမှု
ဆရာမောင်ချောနွယ်ကို ချစ်တဲ့၊ ဆရာ့ကဗျာတွေကို မြတ်နိုးတဲ့ ကဗျာရောင်းရင်းများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ကျနော့်မှာရှိနေတဲ့ ဆရာ့ရဲ့ ကဗျာလုံးချင်း ၂အုပ်နဲ့ ဆရာ့ကဗျာတွေကို လှမ်းမီရာစုဆောင်းထားတဲ့ ကဗျာစာအုပ်တစ်အုပ်ကို တင်ပေးပါရစေ။ ဆရာမောင်ရင့်မာ(ကျောင်းကုန်း)က ဆရာမောင်ချောနွယ်ကို ဒေါသကို သိင်္ဂါရဖြစ်အောင်ရေးဖွဲ့နိုင်တဲ့ တစ်ဦးတည်းသောကဗျာဆရာလို့ ကင်ပွန်းတပ်ကြောင်း မှတ်သားဖူးပါတယ်။ လူငယ်ကဗျာဆရာအများစုကလည်း ဆရာ့ကို ကလပ်စစ်ခေတ်ပေါ်ကဗျာဆရာရယ်လို့ အမည်နာမပြု ချီးကျူးခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်မျိုးတပ်ရမှန်းမသိအောင်ကို ဆရာ့ကဗျာတွေကို စွဲစွဲလန်းလန်းခုံခုံမင်မင် နှစ်သက်မြတ်နိုးမိပါတယ်။ မျိုးဆက်ကွာလှတဲ့အပြင် ဆရာမောင်ချောနွယ်ကို တစ်ကြောင်းခြစ် ရုပ်ပုံကောက်ကြောင်းမှလွဲ၍ ဓာတ်ပုံသော်မျှ မမြင်ဖူးပါ။ ဆရာ့ကဗျာတွေကို ချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာဓာတ်တွေ အမိအရမှုတ်ထုတ်နေတဲ့ အရပ်သားလေသံ၊ ပထမတန်းစား အာဇ္ဇ၀န်းနဲ့ ဆရာမောင်ချောနွယ်ရဲ့ခေတ်ပေါ်ကဗျာ မြို့ရွာသိမ်းပိုက်မှုများကိုမိတ်ဆွေတို့ ဖတ်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ဆီမှာရှိတဲ့ ကဗျာစာအုပ်များ၊ ကဗျာမှတ်စု စာမှတ်စုများကိုလဲ ကျေးဇူးပြု၍ လက်တို့ပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာ။ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ... :) :)
၁။ ရထား(ကဗျာရှည် ၄ပုဒ် စုစည်းမှု) download ယူရန်
၂။ သမိုင်းဖတ်စာ (ဆရာအောင်ချိမ့်နှင့် တွဲဖက်၍) download ယူရန်
၃။ ဆရာမောင်ချောနွယ်ကဗျာများ ( ၅၆ ပုဒ်) download ယူရန်
၄။ မောင်ချောနွယ် ကဗျာပြပွဲ (မြန်မာကျူးပစ်ဖိုရမ်မှ) download ယူရန်
Posted by ညိမ်းညို at 09:319comments
Posted by ညိမ်းညို at 20:33 14 comments
အလို နေခြည်မှာ ရွှေရည်ဝင်းလို့
မဟ၀ှာ ကြည်ကြည်ပေးပါ" တဲ့
"မတွယ်တာ ဆယ်ခါလွှတ်မယ်" တဲ့
တစ်လဆို ရက်ကို ချဉ်းပါဖျာ့"
ဗြောသံကား အဝေးဆီမှပင် ကြားနိုင်သောအစွမ်း ရှိချေ၏။ ပီလှမြည်လှ စည်လှသော ဗြောသံပါပေ။ အလှူတော်မင်္ဂလာနှင့် တွဲဖက်၍ ပွဲထွက်လာချေပြီကော။ အတိုင်းထက်အလွန် တံခွန်နှင့်ကုက္ကား၊ အလှပေါ်အယဉ်ဆင့် တင့်လှပါ၏။ တဗြုန်းဗြုန်းရွှမ်းစည်၍ ပီသကြည်မြ ခန့်ညားလှပါဘိ။ ဗြောသံကား ဆင့်၍ဆင့်၍ ထွက်ပေါ် လာချေပြီ။
ထိုပီလှမြည်လှသော ဗြောသံသည် အဘယ်အရပ်မှလာသနည်း။ အဘယ်ကြောင့် ဤမျှထိုမျှ ခန့်ထည်စည်ကား၍ နေပါသနည်း။
တောင်ကုန်းရွာနေ ဦးရေချမ်း၊ ဒေါ်ရွှေမေတို့၏ အလှူတော်မင်္ဂလာမှ ထွက်ပေါ်လာသော ဗြောသံပင်ဖြစ်ပါတော့သည်။ သားတော်မောင် ကိုရင်လောင်းကို သာသနာ့ဘောင်သို့ သွပ်သွင်းချီးမြှင့်သော ပွဲဖြစ်သည်။ သာသနာတော်တင့်လန်းစေခြင်းငှာ ဆန်းညွှန့်ဝေစည်သော ဗြောသံဖြစ်ပေရကား ဤမျှထိုမျှ ခန့်ထည်နေရခြင်းပါပေ။
ဗုဒ္ဒဘာသာ မြန်မာယောက်ျားလေးများအဖို့ ရှင်ပြုပွဲသည် အရေးပါလှပါသည်။ ရှင်မပြုရသေးပါက ကြီးကြီးငယ်ငယ် လူဘော်မ၀င်သေးဟုပင် အသိအမှတ်ပြုကြလေ့ရှိသည်။ မိဘနှစ်ပါးအဖို့မှာလဲ "မင်းတို့သား ရှင်ပြုပီးပလား" ဟု မေးလာပါက ရင်ကော့၍ ဖြေလိုကြသည်။ သားယောက်ျားလေးမွေးထားပြီဆိုလျှင် ဤတာဝန်ကို မကျေကျေအောင် ထမ်းကြတော့သည်။ ဦးရေချမ်း၊ ဒေါ်ရွှေမေတို့သည်လည်း သားတော်မောင် ရှင်ပြုပွဲအတွက် အားခဲ၍ နွှဲခဲ့ကြသည်။ ကြိုးစားပမ်းစား လုပ်ကိုင်ရှာဖွေ၍ ချွေချွေတာတာ စုဆောင်းပြင်ဆင် ခဲ့ကြသည်။ သို့ဖြစ်လင့်ကစား မိုးမမှန်လေမမှန် ကျေးလက်တောနေ သမရိုးကျမိသားစုလေးဖြစ်သော သူတို့အဖို့ သားလေးလူပျိုပေါက်ဖြစ်မှပင် ရည်မှန်းချက်ပြည့်မြောက်၍ ခရီးပေါက်ရတော့သည်။ ၁၅နှစ်၊ ၁၆နှစ်အရွယ် သားလေးပင် လူပျိုပေါက်ကြီးဖြစ်နေပြီဆိုတော့ ရှင်လောင်းအ၀တ်အစားများနှင့် ရှက်၍များ နေလေမလား။ မိဘနှစ်ပါးမှာ တွေး၍များ ပူမိသေးတော့။ ဘယ်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဦးရေချမ်းနှင့် ဒေါ်ရွှေမေတို့ ရှင်လောင်းအမိအဖ ဖြစ်ကြလေပြီ။ “သစ်ပင်အမြင့်မတက်နဲ့ လူလေးရဲ့၊ မြစ်ကူးချောင်းကူး မသွားလေနဲ့ကွဲ့” စသည်စသည် မှာရပြောရတာကိုက အရသာရှိလှပါ၏။ ရပ်ဝေးရပ်နီး အသီးသီးမှာရှိနေကြတဲ့ ဆွေမျိုးညာတိ၊ မိတ်ဆွေ သင်္ဂဟအပေါင်းကိုလဲ လူကြုံနှင့်တစ်မျိုး စာနှင့်တစ်တန် အသိပေးဖိတ်ကြားလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။
သားတော်မောင်ကိုမူ ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ထံသို့ အပ်နှံလိုက်ပြီ။ ဆရာတော်က ပုတီးစိပ်၊ သင်္ကန်းတောင်း၊ သေခိယ စသည်တို့ကို သင်ကြားပေးမည်။ သာသနာတော်စည်းကမ်းတို့ကို ညွှန်ကြားပြသပေးမည် ဖြစ်သည်။
သို့နှင့် ဦးရေချမ်း၊ ဒေါ်ရွှေမေတို့၏သားလေး ကိုရင်လောင်းဘ၀ရောက်တော့မည်။ အလှူတော်မင်္ဂလာကား နီးသထက် နီးခဲ့လေပြီ။
ကိုရင်လောင်းတစ်ယောက် နား၊ မျက်စိတို့လည်ရလေပြီ။ မဏ္ဍပ်ကြီးမှာ ခမ်းနားလှပါကလား။ သင်္ဃာစင်မှာလည်း မှိုင်းလုံးကော်ဇောကြီးတွေကာလို့။ ပွတ်လုံးပုံတွေ၊ ပန်းရာဇမတ်ပုံတွေနှင့် ၀င့်ထည်ခန့်ငြားနိုင်လွန်းပါဘိ။ ရောင်စုံစက္ကူ ဖြူနီညိုပြာတို့ဖြင့် မဏ္ဍပ်တိုင်များကို အလှဆင်ထားသည်မှာ နတ်ဘုံနတ်နန်းသို့ ရောက်နေပြီလောဟု ထင်မှတ်စေ၏။ ငှက်ပျောခိုင်၊ အုန်းခိုင်နှင့် ဓနိခိုင်များကိုလည်း ဆွဲထားသေး၏။ အလို မဏ္ဍပ်တိုင်တစ်ခုမှာ ဆွဲထားတဲ့ ငှက်ပျောပွဲက ထူးခြားလှပါကလား၊ သြော်.. မိုးမရွာအောင် ကိုးထားတာတဲ့။ အဲ သည်ပွဲထဲမှာ ငွေမတ်စေ့တစ်စေ့လဲ ပါသေးသဗျ။
ကိုရင်လောင်းလူပျိုပေါက်မှာ မျက်နှာတွင် သနပ်ခါးအဖွေးသားနှင့် နေရထိုင်ရ ခက်လှချည့်။ ၀တ်လဲတော်ပုဆိုးက အသစ်စက်စက်၊ ထိုင်းမသိမ်းအင်္ကျီဆိုတာကြီးကလည်း အသားကပ်နေသေး။ ဘယ်နှယ့်ပါလိမ့်နော်။ ကြွက်နီတို့ ခွေးပုတို့ကလည်း တစ်ချိန်လုံး ကိုရင်လောင်းကို စ,နေကြတော့တာပဲ။
ဟော..အရုဏ်တက်ကတည်းက တီးမှုတ်နေကြတဲ့ ဗြောဆရာကြီးတို့ ရောက်လာကြပြီ။ မြင်းဖြူကြီးကလည်း ၀င့်ဝင့်ကြွားကြွား မြင့်မြင့်မားမားနှင့် အသင့်ရှိနေပြီ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ ရွှေထီးလဲ ငှားလာကြပြီ။ အဘယ်သော အမှုကျန်သေးသနည်း။
ကျန်ပါသေး၏။ ကွမ်းတောင်ကိုင်၊ ပန်းတောင်ကိုင်ကိစ္စ...။
မဏ္ဍပ်အ၀န်းအ၀ိုင်းထဲသို့ ကိုရင်လောင်း မျက်စိကစားရလေပြီ။ အဒေါ်ကြီးတစ်ဦးသည် မိန်းမပျိုလေးများကို အကျွေးအမွေးကိစ္စအတွက် စီမံညွှန်ကြားနေဟန်ရှိ၏။ ဟော..ဟော ကွမ်းတောင်၊ ပန်းတောင်ကိုင်ရန် ခန့်ခွဲနေပြီ။ ဟင်..အဒေါ်ကြီး မျက်နှာလိုက်လိုက်တာ၊ သူဌေးသမီးကို ကွမ်းတောင်ကိုင်ရမတဲ့။ လှလဲမလှဘဲနဲ့။ ဟိုမိန်းမပျိုလေးကို မကိုင်ခိုင်းရကောင်းလော။ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ နူးနူးညံ့ညံ့ကလေး။ မျက်နှာကလေးကလည်း ယဉ်ပါဘိသနဲ့။ စိန်တွေရွှေတွေမဆင်နိုင်ပေမဲ့ စံပယ်ပန်းကုံးလေးပန်ထားပုံများ အလှပေါ်အယဉ်ဆင့်လို့ တင့်လှပါဘိ။ သူ့ကိုပဲ ကွမ်းတောင် ကိုင်ပါစေတော့လား။ အဒေါ်ကြီး မျက်နှာကိုလိုက်တယ်။ ကိုရင်လောင်းမျက်နှာ လငပုပ်ဖမ်းရလေပြီ။ ညိုညိုမှောင်၍ မည်းပြီတကား။ သူဌေးသမီး၊ ပွဲစားသမီး၊ သူကြီးသမီးတို့ ကွမ်းတောင်အစေ့အငှ ရကြလေပြီ။ အမယ် ကွမ်းတောင်တစ်ခု ပိုနေပါသေးကလား။ မျက်နှာလိုက်တဲ့ အဒေါ်ကြီး သည်တစ်ခါဖြင့် ဘယ်သူ့ကို ပေးမှာပါလိမ့်။
ကိုရင်လောင်း၏ မျက်နှာသည် တိမ်ကင်းစင်သော လနှယ်၊ ကြည်လင်ဝင်းပလာ၏။ ရိုးရိုးယဉ်ယဉ် မိန်းမပျိုကလေးသည် ကွမ်းတောင်ကို ဣနြေ္ဒရရ လက်ခံယူ၏။ ယင်းနောက် သင်္ဃာစင်ဘက်သို့ ကြည့်လိုက်ရာ ဘသားချော ကိုရင်လောင်းနှင့် အကြည့်ချင်းဆုံမိကြသည်။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ၊ သူတို့နှစ်ဦး မျက်နှာနွေးသွားသည်။ လူအများနှင့် အုတ်အုတ်သဲသဲ စည်ကားကျယ်ဝန်းလှသော မဏ္ဍပ်ကြီးသည် နှစ်ဦးသားအဖို့ ခဏမျှေ၀၀ါးသွားရလေ၏။
မြင်းဖြူကြီး ကဏ္ဍိကသည် ကကြိုးတန်ဆာ စုံလင်စွာဖြင့် မဏ္ဍပ်ဝတွင် အသင့်ရှိနေလေပြီ။ ဗြောဆရာကြီးတို့သည် ဗြောသံနှင့်အတူ ကိုရင်လောင်းကို မြင်းပေါ်သို့ တင်ကြလေ၏။ "ကဏ္ဍိကရေ၊ မောင်ရင်လောင်း သာသနာ့ဘောင်အတွင်း သက်ဆင်းတော့မှာမို့ ပါရမီဖြည့်ဖော်ဖြည့်ဖက်အနေနဲ့ ကောင်းမွန်စွာ လိုက်ပို့ပါ" ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသော လင်္ကာရှည်ကြီးဖြင့် အမိန့်တော်ပြန်၏။
ပျိုပျိုအိုအို၊ ကြီးကြီးငယ်ငယ်၊ ယောက်ျားမိန်းမ အစုစုတို့သည် ဗြောသံကို နာခံရင်း မဏ္ဍပ်မှ စီရရီ ညီညာစွာ ထွက်ကြလေပြီ။
နေမင်းသည် တောကိုလည်းကျော်၊ တောင်ကိုလည်း ကျော်ခဲ့လေပြီ။ ၀ါရွှေသောအလင်းတန်းတို့ကို တောင်ကုန်းရွာလေးအပေါ်သို့ သွန်းပက်ဖြန့်ကြဲလေပြီ။ နေရောင်ဝယ် ရွှေထီးတို့သည် ၀င်းဝင်းပြက်ပြက်။ ရွာသူရွာသားတို့သည် ၀တ်ကောင်းစားလှများဖြင့် တင့်လှယဉ်လှပါ၏။ အတင့်ဆုံးအ၀င့်ဆုံးကား သူတို့ဆင်မြန်းထားသည့် ရိုးဂုဏ်မြင့်သော အပြုံးပွင့်လေးများပင်။
ဗြောဆရာကြီးတို့က လက်စွမ်းပြ၏။ ကာလသားတို့က ချပ်၍ညှပ်၍ ရတုဆို၏။ "စာပုလွေရှေ့မှာခင်းပါလို့ ရုပ် တွက်ရင်းရယ်တဲ့ မောင်ကငို" ဟု ရတုသမားကတိုင်လျှင် ကာလသားတို့က တိုင်ပင်ကျယ်ကျယ်ခေါ်၍ "ရွှဲ" လိုက်ကြ၏။ ရတုအမျိုးမျိုးရှိသည့်အနက် ကိုရင်လောင်းနှင့် စံပယ်ဖြူဖွေး ကွမ်းတောင်ကိုင် မိန်းကလေး၏ စိတ်ကို အထိခိုက်ဆုံးသောရတုကား သာသနာ့ဘောင်မှာ သာသနာ့ဝန်ကို ထမ်းလိုတာမို့ တစ်လလောက်ခွင့် ပြုဖို့အရေး အခွင့်တောင်းသော ရတုပင်ဖြစ်သည်။ ဤရတုသည် ကိုရင်လောင်း၏ စိတ်ကို ထိခိုက်လှချေ၏။ မြင်းပေါ်မှ ကိုရင်လောင်းသည် ရုတ်ချည်းပင် မျက်နှာညှိုးနွမ်း၍ ဦးခေါင်းငိုက်စိုက် ကျရလေပြီ။ မြင်းဖြူကြီး ကဏ္ဍိကသည်ပင် သူ့သခင်စိတ်နှလုံးညှိုးနွမ်း၍ ဣနြေ္ဒမဆည်နိုင် ဖြစ်ရလေပြီ။
ကိုရင်လောင်းသည် တစ်ပူပေါ်နှစ်ပူ ဆင့်ရလေပြီ။ အမိအဖတို့၏ ရင်ငွေ့မှခွဲခွာ၍ ကျောင်းကြီးပေါ်မှာ နေရတော့မည်။ ကစားဖော်ချင်း သူငယ်ချင်းများနှင့်ခွဲ၍ ဆရာတော်ကြီးရှေ့ဝယ် ပုတီးစိပ်ရတော့မည်။ သားတော်မောင် ကိုရင်လောင်းကား အတော်လေး လူလားမြောက်၍ လူပျိုပေါက်ကြီးဖြစ်ခါစ။ အလှူတော်မင်္ဂလာပွဲကို ဆင်နွှဲနေရလင့်ကစား သူ့မှာလဲ နှလုံးသားရေးရာ ပြဿနာလေးများက ရှိနေပြန်ပါသေး၏။ ကိုရင်လောင်းအဖို့ စံပယ်ဖြူဖွေး ကွမ်းတောင်ကိုင်မိန်းမပျိုလေးဆီမှ တစ်လတာဝေးကွာရမည်မှာ အဆိုးဆုံး ဖြစ်ချေတော့သည်။ ကိုရင်လောင်းသည် စိတ်နှလုံး ကြေကွဲလျက် ကွမ်းတောင်ကိုင်ကလေး ရှိရာသို့ ငဲ့စောင်း၍ ကြည့်မိလေသည်။
ကွမ်းတောင်ကိုင်မလေးသည်လည်း ကိုရင်လောင်းနည်းတူ ထိုရတုကို ကြားရပါ၏။ အကယ်စင်စစ် ထိုရတုကို မိန်းမပျိုလေး မကြားလိုပါလေ။ တစ်လတောင် ခွင့်ပေးရမတဲ့။ များလွန်းလှချည့်။ ခွဲထွက်ရှောင်သွေ နေနိုင်လွန်းလှချည့်။ တကထဲ သည်လောက်တောင် ရှိလှမင့်ဟာ...။ တစ်လမဟုတ်ဘူး၊ ဆယ်လ။ တစ်ကြိမ်မဟုတ်ဘူး၊ ဆယ်ကြိမ်။ ခွင့်ပြုတယ်၊ ခွင့်လွှတ်တယ်။ ကြွတော်မူပါတော်ရေ...။ မိန်းမပျိုလေး၏ စိတ်ထဲဝယ် ဂရုဏာဒေါသတို့ လှိုင်းထလျက်ရှိသည်။ သည်လောက်တောင် ရက်ရက်စက်စက် ခွင့်တောင်းရပါမည်လားဟု ရှက်လဲရှက်မိ၊ ဒေါသစိတ်ကလေးလဲ ဖြစ်မိရကား ခမျာမှာ လက်ထဲမှကွမ်းတောင်ကလေးပင် မြေသို့ ခ,ရရှာတော့ သည်။
ခမျာလေးမှာ လူကသာ ရှင်လောင်းလှည့်နေရသော်ငြား စိတ်ဝယ် တိတ်တိတ်ကလေး ပူဆွေးနေရချေပြီ။ သြော်...သူတို့တွေ ပျော်နိုင်ရက်ပါပေ့နော်...။ ဗြောဆရာကြီးတွေကလဲ တီးလိုက်ခေါက်လိုက်ကြတာ၊ နှဲဆရာကြီးကလဲ မှုတ်နိုင်ပါပေ့။ ကာလသားတသိုက်ကလဲ "ရွှဲ" လိုက်သံ တညံညံနဲ့ မစာနာ၊ မသနား အငြိုးနဲ့များ လှောင်ကြလေသလားနော်..။ ဒီမှာဖြင့် မပူရုပ်နဲ့ ဟန်လုပ်နေရပါတယ် တော်ရယ်..။
စံပယ်ဖြူဖွေး ကွမ်းတောင်ကိုင်လုံမလေးမှာ ၀မ်းနည်းစိတ်တို့ တလိပ်လိပ်..။ မျက်ရည်ကလေးများပင် လည်ရှာလေပြီ။ အမယ်မင်း ကိုရင်လောင်းကြီးဘုရား။ ကျွန်တော်မျိုးမကို ဒီလူရှုပ်လူပွေတွေကြားထဲ စိတ်ချလက်ချ ထားခဲ့တော့မှာလားတော်။ တစ်ကောင်ကြွက် တစ်မျက်နှာ မျက်စိသူငယ် နားသူငယ်မို့ များလွန်းလှတဲ့ ရက်သုံးဆယ်ကို လျှော့တော်မူပါဦးလားတော်ရယ်..။ စောစောကလေ ကျွန်တော်မျိုးမ စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ ပြောခဲ့မိပါတယ်။ တစ်လမဟုတ် ဆယ်လလွှတ်မယ်ဆိုတဲ့စကား၊ ဘွာခတ်လို့ ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းပါရစေလား တော်ရယ်..။
ဗြောသံသည် တဖြေးဖြေး ဝေး၍ဝေး၍ သွားလေပြီ။ ပီသကြည်မြလှသော ဗြောသံသည် တောင်ကုန်းရွာလေးကို တစ်ပတ်ပတ်မိချေပြီတကား။ မကြာမီ ရွာဦးကျောင်းသို့ တစ်ကျော့ဝင်လာတော့မည်။ အလို...ပီလှမြည်လှ စည်လှသော ဗြောသံဝယ် ရှိုက်သံသဲ့သဲ့ကလေးသည် ဘဇာကြောင့် ကပ်ငြိ၍ ပါလာရပါသနည်း။
Posted by ညိမ်းညို at 19:09 13 comments
မူးမူးနဲ့ ပွေးစုံ့တွေကို အနံ့ခံခဲ့ကြတာ
မူးမူးနဲ့ မျက်နှာစိမ်းတွေကို ရန်ပြုခဲ့ကြတာ
မူးမူးနဲ့ ဖွတ်တွေပုတတ်တွေ လိုက်ခဲ့ကြတာ
မူးမူးနဲ့ တရွာသားတွေနဲ့ ရန်ဖြစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာ
မူးမူးနဲ့ ၀ါပင်လေးတွေကို ပွတ်တိုက်နင်းချေခဲ့ကြတာ
မူးမူးနဲ့ ပဲကြီးပွင့်ဖြူဖြူလေးတွေကို နမ်းရှိုက်ခဲ့ကြတာ
မူးမူးနဲ့ ကင်းတားလက်ဝဲမြောင်းကို တမြုံ့မြုံ့ကူးခဲ့ကြတာ
မူးမူးနဲ့ မြေနီသဲဝင်းနှမ်းတလင်းမှာ ပုလင်းတူဘူးစို့ခဲ့ကြတာ
မူးမူးနဲ့ ဖရဲခင်းပယ်သီးတွေကြား ခုန်ပေါက်ပြေးလွှားခဲ့ကြတာ
မူးမူးနဲ့ မန်ကျည်းပင်ရိပ်နွေအတိတ်မှာ အော်ဟစ်ငိုယိုခဲ့ကြတာ
မူးမူးနဲ့ နာနတ်ရိုင်းကွင်း လိပ်ကျင်းတွေထဲ ချော်လဲရောထိုင်ခဲ့ကြတာ
မူးမူးနဲ့ ပြောင်းရိုးတွေကြား လွန်းထိုးလွန်းတင် ကြင်နာသတ်ပုတ်ခဲ့ကြတာ
မူးမူးနဲ့ နှင်းရည်မွှေးမြ မြေပဲခင်းစိမ်းရင့်ညိုမှောင်တွေပေါ် လူးလှိမ့်ခဲ့ကြတာ
မူးမူးနဲ့ ညွှတ်သီးဖြာကျ ပဲတီပင်တွေအောက် တမေ့တဆွေး အိပ်မောကျခဲ့ကြတာ
မူးမူးနဲ့ ထနောင်း၊ သနပ် တံလှပ်အရိပ်တွေထဲ ဘ၀ကို ပွဲတော်လိုတွေးခေါ်ခဲ့ကြတာ
မူးမူးနဲ့ မည်းမှောင်ခဲသိပ်တိမ်တလိပ်ကို ဖြိုင်ဖြိုင်သဲသဲရွာလေမလားလို့ မျှော်တော်ဇောနဲ့မောခဲ့ကြတာ
မူးမူးနဲ့ နေရောင်သွေ့သွေ့ လေပြေစွေ့စွေ့မှာ တရွာသူပျိုဖြူချောတို့ကို ပိုးပန်းခဲ့ကြတာ
(ဟဲ့ ဟိုဟာမလေး ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ နေတယ်မို့လား)
မူးမူးနဲ့ ရွာရဲ့ကွမ်းတောင်ကိုင်အလှပဂေး ကောင်မလေးကို ခပ်မြူးမြူး ကြည့်ခဲ့ကြတာ
Posted by ညိမ်းညို at 03:38 15 comments
Posted by ညိမ်းညို at 02:57 15 comments
မိုးထဲလေထဲမှာ ငါတို့ဟာ တစ်ယောက်လည်းပင်းတစ်ယောက်ဖက်လို့
မိုးထဲလေထဲမှာ ငါတို့ဟာ တစ်ယောက်လည်ပင်းတစ်ယောက်ဖက်လို့
Posted by ညိမ်းညို at 06:44 12 comments
- ဂါဂါနဲ့ သူငယ်ချင်းမျှားပြာတို့အတွက် ကျနော့်ရဲ့ ရာသီဦးမှာ ခူးဆွတ်လိုက်တဲ့ဖလားကို အပ်နှင်းလိုက်ပါတယ်။
Posted by ညိမ်းညို at 01:10 16 comments
Posted by ညိမ်းညို at 02:53 10 comments
Posted by ညိမ်းညို at 16:56 20 comments
Posted by ညိမ်းညို at 00:30 23 comments
Posted by ညိမ်းညို at 16:04 24 comments
ရင်ဘတ်ကြီးကတော့ ခင်ဗျားတို့လိုပဲ ထိလွယ်ရှလွယ်
ps- MSU ကျောင်းသွားလည်တော့ မျှားပြာကြီးက နားပေါက်ဖောက်ပေးမယ် တကဲကဲလုပ်နေလို့ သူမဖောက်ခင်
ကိုယ်ကအရင်ဦးအောင် ကဗျာထဲမှာ နားကွင်းဆွဲပစ်လိုက်တယ်။ ကိုင်း…မှတ်ကရော :P
Posted by ညိမ်းညို at 22:19 17 comments
" မိမိကိုယ်ကို နာမည်ကြီးအောင်၊ ကြွယ်ဝအောင် လုပ်တတ်သည်မှာ နိုင်ငံရေးမဟုတ်။ တိုင်းပြည်ကောင်းအောင်လုပ်တတ်မှ နိုင်ငံရေးဖြစ်၏ "
(ပုံကို ဒီက ယူပါတယ်)
သြော်၊ အဆောင်ဆောင်နန်းတွေ၊ ကြငှန်းတွေနှင့်နှော၊ အခေါင်မမြန်းခင်က၊ အောင်စာတမ်းချို့စေဘို့၊ အောင် ပန်းညို့ရရှာတဲ့၊ တောင်တမန်းတို့ဗမာမှာ၊ အဟောင်းသံသရာ အငုတ်တွေနှင့် အောင်ဆန်းတို့ မသာမယာဟာ၊ ၎င်းကံကြမ္မာ အလုပ်ပေထင့်၊ သောင်းမြန် မရဏာစမုတ်မှာတော့ ချုပ်သနဲ့ ယင်းအလိုတွင်၊ ဒေါင်းလံပုဝါ အုပ်ပါလို့ ကျုပ်ဖြင့် သဂြုင်္ိဟ်ချင်။
သြော် တပည့်ရင်းတွေမို့၊ က၀ိမတင်းနိုင်ဘုကွယ့် သတိကင်းကာ မျက်ရည်ကျကျပြီး၊ ခက်ကပြီ လက်ဆည်လို့ မရနိုင်ဘု၊ သောက ဘလောင်ဆူတော့၊ တောင်ဇမ္ဗူ ပုဂံခေတ်ဆီက၊ ယခေါင်မူ ယမန်သနစ်တွေပေါ့၊ ရန်အဖြစ် မကွယ့် မနှေးသနော် တသောင်းဇမ္ဗူရမ်းနေကြ၊ ကျန်ရစ်သူမြေးတော် အလောင်းစည်သူရဲ့နန်းကိုဖြင့်၊ လူကြမ်း ဓပြတွေ ကြမ်းလာ ရမ်းလာတဲ့အရေးတွင်မှ၊ ဘေးအပေါင်းကြီးစွာ ဝေဒနာအစုံနဲ့၊ သွေးချောင်းစီးကာ သေရှာ ပုံရဲ့ပြင် ရွှေမြန်မာဘုံမှာ အမင်းမင်း သမတတွေနဲ့၊ သတင်းလှတဲ့ အင်းဝရာဇာအမွန် သာလွန်မင်းကိုမှ၊ သားရင်း ရှင်တရုပ် ကယ်က၊ ရှင်ဘုရင်လုပ်မယ် အကျယ်ဇယားတွေဖြင့်၊ ဒ၀ယ်သားတွေ ဗိုလ်ဝင်ခံလို့မို့၊ ဟိုအရင် ယမန် နန်းတော်စီးစဉ်က၊ အပျက်ကြီးပျက်ကာ အသက်ခန္ဗ္ဓာတွေဆုံးပုံနဲ့၊ တထုံးနောက်တနဲမှာတော့၊ မင်းရဲရန္တမိတ် ခမျာမှာ ညီသနင်းပေပေါ့၊ ပြည်မင်းဂုဏ်ခံလို့၊ မှုန်မှုန်ဆန်ဆန် ပုန်ကန်တဲ့အတိုင်းရဲ့ပြင်၊ တလိုင်းနယ် ရွှေပြည် တခွင်မတော့၊ ဓမ္မစေတီဘုရင်လက်ထက်တုန်းဆီက၊ လက်ရုံးရည် တသိန် လျှမ်းပေတဲ့၊ သမိန်ဗရမ်းဆိုသူ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကိုဖြင့်၊ မဟုတ်တရုတ် အကောင် တေလေ တစ္ဆေ ကိုက်တာနဲ့၊ သြော် ဖွေဖွေရှာရှာ မကျေစရာ ပေပေါ့နှော၊ မရေမရာ သေရွာဆိုက်သလိုပါ့၊ အခိုက်အခါတူမို့လို့၊ ဆရာတမူ မကြာမကြာ လွမ်းရပါတဲ့၊ ဘမရာ အဆူဆူ ကြာကြငှန်းတွေနှင့်၊ မြန်မာဇမ္ဗူ အညာမန်းတွင်ဖြင့် ငါတလူ ငါသရမ်းရော့မဟဲ့လို့၊ သာခန်း ပလ္လင်ညွှန်းပြီး၊ မြင်ကွန်းပိုင် သူပုန်ထစဉ်က၊ ကြုံရသူ မသာတော်နှင့်၊ ပမာသော်တူတယ်လို့ နှိုင်းမိတယ်၊ ရိုင်းသတဲ့ အတိတ်ယခင်လိုနော်ကွယ်၊ စကိုင်းတပဲ့ ဂိုဏ်းဖွဲ့တွေနဲ့၊ မှိုင်းရဲ့စိတ်ထင်။
မင်းစိတ်မင်းမာန် အကြံအဖန်ကင်းလိုက်ပုံက၊ အင်္ဂလိပ် ယင်းဂျပန် နှစ်တန်ရှင်းပါလို့၊ ရန်ခပင်းကိုတဲ့ မောင်းကာ နှင်၊ ဒေါင်းမြန်မာတခွင်မှာဖြင့် ယခင်သဘော၊ (အိုကွယ်) တကောင်းရာဇ၀င်ကိုတဲ့ ဆက်ချင်သကော။
နန်းမြို့တည်ရန်၊ မှန်းလို့ရည်ကာသန်တဲ့၊ ညီလာခံ ဗိုလ်ရှုပွဲတွင်မှ၊ ထိုထိုလူ့ခပဲကိုမကြည်ညိုတဲ့၊ ၀သီလို တဖြေး ဖြေးရူးမဟဲ့လို့၊ တနွေးနွေး မူးမူးပြီး၊ ခွေးဘီလူးလိုအကောင်မိုက်တွေက၊ သြော် အမှောင်စရိုက်ကယ်နှင့်၊ ပြောင် ပြောင်ဘဲမိုက်မပေါ့လို့၊ ဗြောင်ကိုက်သဟာမှာ ယာယီတြာအချိန်နဲ့၊ ဇာတာမှိန်လို့မို့၊ ဂဏာမငြိမ် တာဝတိန် ယွန်းကြပေါ့၊ ဖြေမကြည် နေရီတော့လွမ်းစေဘို့၊ မြန်မာ့ပြည်ပေါ်ကို ဓမ္မစည်တော်ရွမ်းချိန်မို့၊ အစွမ်းကုန် သည်တ ခါဖြင့်၊ ပြည်ရွာ ညီညာဘို့ အလုပ်ပေပါ့၊ သုဿန် တံခွန်စောင်းရရှာတဲ့၊ ရုပ်အကျန်ခုနှစ်လောင်းရယ်နှင့်၊ အလွန် ကောင်းစွာ ကမ္ဘာတည်မည့်၊ အာဇာနည်ဗိမာန်ပုထိုးကိုဖြင့်၊ ပါရမီအဓိဋ္ဌာန်တမျိုးရယ်နှင့်၊ ရှိခိုးကာဆရာကန် တော့ချင်ရဲ့၊ မြန်မာမတော့ ပူစရာဘို့၊ တဗျူဟာ အောင်ခမန်းတွင်မှ၊ လူမသမာ အမှောင်သန်းချိန်မို့၊ သောင် ကမ်းမို့မို့ဆီက၊ ဖောင်နန်းကူးတို့နှင့် အကြေဒဂုန်တည်းဟူသော ရေစုန်မျောလေရဲ့၊ သြော် တောင်နန်း မြောက်နန်း အဆောင်ကြငှန်းနဲ့၊ အခေါင်မမြန်းရခင်က၊ အောင်ပန်းညို့ရရှာတဲ့၊ အောင်ဆန်းတို့ သေပုံနှမြော။
Posted by ညိမ်းညို at 00:25 10 comments
Labels: အထိမ်းအမှတ် စာ/ကဗျာ
မိုးထဲလေထဲမှာ ငါတို့ဟာ တစ်ယောက်လည်းပင်းတစ်ယောက်ဖက်...